24-inch iMac Svondo | Ndinobva mac
Izvo zvinokwanisika kuti kune vazhinji venyu vhiki rino rakakosha chaizvo uye nderekuti kusvika kweiyo nyowani 24-inch iMac mumaoko evaridzi vatsva kwave pedyo. Mupfungwa iyi, iyo Cupertino kambani inoita kunge yanga iine mamwe matambudziko ekutakura, asi kune avo vakachengeta michina ichangotanga, vanotova navo kuti vabate maoko avo.
Apple irikuita kuyedza kukuru kuti ive nehuwandu hwehuwandu hwezvinhu izvi nyowani 24-inch iMac tzvese muzvitoro zvavo zvepanyama uye muchitoro chepamhepo. Icho hachisi chinhu chakareruka sezvo kushaikwa kwezvinhu kuri kuita kuti zvive zvakaoma kuwedzera stock asi iye anoramba achirwira kuti awane iyo yakawanda inogoneka.
Shanduko mumirairo maererano nekutakura
Svondo rapfuura takaona shanduko kana kufamba mune zvakatumirwa izvi 24-inch iMac, mune mazhinji acho vakaratidza kutumirwa kune izvo zvinofanirwa kunge zviri muvhiki rino rese uye zvirokwazvo muzviitiko zvakawanda Chishanu chinotevera, Chivabvu 21 ivo vachatanga kusvika kune avo vane kodzero.
Ikozvino stock yeiyo nyowani 24-inch iMac yakaderera uye seta zvinyorwa zvevhiki rekupedzisira raJune saka ndiko kunonoka kukuru mukutakura. Zvinogona kuti sezvo kudiwa kwemidziyo mitsva kuchiderera, nguva yekutumira ichadzikirawo asi parizvino kana iwe uchida iMac nyowani mune chero ruvara kumirira kunenge kuri kureba, kureba kupfuura zvakajairwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » 24-inch iMac vhiki